वैज्ञानिकहरूले बनाए पुरुषका लागि गर्भनिरोधक जेल - Khabar Break | Khabar Break
वैज्ञानिकहरूले बनाए पुरुषका लागि गर्भनिरोधक जेल
सम्बन्ध बनाएको बेलामा कन्डम लगाउन नचाहने पुरुष र बनाएपछि गर्भनिरोधक चक्की खान नचाहने महिलाका लागि वैज्ञानिकहरूले जेल बनाएका छन् । जनसंख्या परिषद्का युनिस केनेडी श्रीभरले एउटा यस्तो जेल बनाएका छन् जसको प्रयोग पुरुषहरूले गर्दा महिलामा गर्भ बस्दैन ।
यो जेलले पुरुषहरूमा भएको शुक्रकीटको संख्यामा कमी ल्याउँछ । तर यो अस्थायी उपाय मात्र हो । गर्भनिरोध अभियान चलाउने डा डायना ब्लाइथ भन्छिन्, ‘धेरै महिला हर्मोनल गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । अनि पुरुषको गर्भनिरोधक साधन भनेको कन्डम र नसबन्दी मात्र हो । त्यसैले अहिले बनेको जेल पुरुष गर्भनिरोध क्षेत्रमा
असरदार र बलियो माध्यम हो । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यको एक महत्त्वपूर्ण कमीलाई पूरा गर्छ ।’यो जेलको नाम एनईएसटी राखिएको छ । पुरुषले जेललाई ढाड र काँधमा दल्नुपर्छ । जेल छालामा सोसिएपछि असर देखाउन थाल्छ । जेल बनाउनका लागि टेस्टोस्टेरोनसँगै सेजेस्टेरोन नामक कम्पाउन्ड पनि छ ।
सेजेस्टेरोनले पुरुषहरूको अण्डकोषमा भएको टेस्टोस्टेरोनको प्राकृतिक उत्पादनलाई रोक्छ जसले वीर्यको उत्पादनलाई स्वात्तै कम गरिदिन्छ । तर यसले यौनेच्छामा कुनै कमी ल्याउँदैछ ।
यो जेललाई संसारभरिका ४२० जोडीमा परीक्षण गरिनेछ र यसको असरको परीक्षण हुनेछ । एजेन्सी
कोरोनाबारे भ्रामक सूचनाका कारण विश्वभरी झन्डै ८ सयले ज्यान गुमाए
पुच्छ्रेताराका कारण आज अत्याधिक उल्का वर्षा हुने
जब महिलाले आफूलाई कुखुरा ठानिन्
प्राथमिक विद्यालयबाट ८ वर्षका बालक पक्राउ
मकवानपुरकी एक महिलाले जनमाइन् पाँच किलोको बच्चा
यसरी पृथ्वीमै बन्दैछ विशाल सूर्य
आठ महिनापछि जेलबाट रिहा भयो कुखुरो !
मुखभित्र पनि ट्याटु ?
श्रीमतीका १४ प्रेमीसँग श्रीमानले मागे १०० करोड क्षतीपूर्ती